Izibonelelo zokuvavanywa kweeKhuphoni kunye nezaphulelo | Martech Zone
Izibonelelo zokuvavanywa kweeKhuphoni kunye nezaphulelo
NgeCawa, ngo-Novemba 29, 2015 NgoMvulo, Novemba 30, 2015 Douglas Karr
Ngaba uhlawula ipremiyamu ukufumana izikhokelo ezitsha, okanye ubonelela ngesaphulelo ukuze ubatsalane? Ezinye iinkampani azizukuchukumisa amakhuphoni kunye nezaphulelo kuba boyika ukuthoba uphawu lweempawu zabo. Ezinye iinkampani ziye zaxhomekeka kubo, ngokunciphisa ingozi yokufumana inzuzo. Akuthandabuzeki ukuba bayasebenza okanye abayisebenzi, nangona kunjalo. I-59% yabathengisi bedijithali bathi izaphulelo kunye neebundles ziyasebenza ekufumaneni abathengi abatsha.
Ngelixa izaphulelo zingaqhelekanga xa uqhuba inzuzo yexesha elifutshane, zinokuphazamisa umgca wakho osezantsi, kwaye uqeqeshe wonke umthengi ukuba angaze athenge ngexabiso elipheleleyo. Oko akutsho ukuba iimveliso azifanele zinciphise konke-abathengisi abaphucukileyo ngoku bajolise ekuthumeleni izaphulelo ngobuchule ngokuchasene nokubaphatha njengoomatshini bokuguqula into enye. UJason Grunberg, Sailthru
Isitshixo sokuhambisa amatikiti kunye nezaphulelo kukuwavavanya. I-53% yabathengisi bedijithali baqhuba i-A / B ephambili okanye uvavanyo oluninzi. Jonga amaxabiso okuguqula, amajelo asetyenzisiweyo, ukuthengwa kwamaxesha, ixabiso loku-odola eliphakathi kunye nexabiso lokuphila labathengi abafunyenwe ngokusebenzisa amatikiti kunye nezaphulelo.
Sabelane ngayo yonke into abathengisi kufuneka bazi malunga namatikiti kunye nezicwangciso zesaphulelo kwi-infographic yangaphambili. Nangona kunjalo, konke kuya ezantsi ukwahluka kwexabiso, ukubopha, kunye nokuphindaphindeka kwezaphulelo de ufumane indibaniselwano elungileyo etsala kwaye igcine abathengi ngaphandle kokophula ibhanki!
tags: Ixabiso le-odolo eliqhelekileyoimiguduIindlela zekhuphoniamatikitiamaqhinga esaphuleloisaphulelo kwiminyaka yedijithaliixabiso lomthengi lobomi bonkeIxabiso lobomiyiseyamauvavanyo
Ukuqhawulwa kweenkcukacha ezi-5 kunye noQikelelo olubi lweNtengiso
Iindlela ezili-11 zokunyusa i-ROI yoThengiso lwakho loMxholo